अखिलका उमेद्वार लुरे कमरेड को हुन् ?::RATONEWS
अखिलका उमेद्वार लुरे कमरेड को हुन् ?
पूर्व पहाडी जिल्ला ताप्लेजुंगमा जन्मिएका सन्तोष तिमल्सिना अर्थात लुरे कमरेड सानैदेखि बामपन्थी आन्दोलनमा लागेका व्यक्ति हुन् !
उनि २०५८ सालमा राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेची खाने थलो हो भनेर माओबादि जनयुदमा लागे !त्यहि क्रमममा २०६१ सालमा सेनाले झापाबाट समाय्त्यो !२०६२ माघमा सर्च्बोच अदालतको आदेसमा रिहा भए ! रिहा भए लगतै उनि राजाको शाही सासन बिरुद सडकमा ओर्लिए !
१९ दिने जनाअन्दोलनमा उनि भिजिलान्तेको आक्रमण मा परे ! उनको ढाडमा गम्भीर चोट लाग्यो , आन्दोलनकै क्रममा उनि पटक पटक प्रहरी हिरासदमा बसे !
जब माओबादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो , लुरे कमरेडलाई माओबादि भित्रको शैली प्रवृतिको उनि त्यहि बसेर भन्दाफोर गरे !
सेनाको सिरासतामा हुदा उनलाई राज्यले आत्मासमर्पण गर्न दवाफ दियो तर उनले हज्जार पल्ट गिरफ्तारी दिन्छु तर आत्मासमर्पण गर्दिन भने !
तिनै लुरे कमरेड २०६३ सालमा माओबादिसगको सबनध तोड्दै एमालेमा फर्किए ! एमालले पनि उनलाई लामो समय कुनै जिम्बेवारी दिएन तर उनले हरेस खाएनन !
लुरे कमरेडका दुइ वटा कबिता संग्रह प्रकासित भएको छ !उनि सगै माओबादिमा राजनिति गरेकाहरु कोहि मन्त्रि भए कोहि साम्सद भए तर लुरे कमरेड अहिले एमाले अखिलको आगामी महाधिबेसनामा केन्द्रिय सदस्यको टिकट लिएर राजनीतिमा टुटेको कडीलाई जोड्न चाहेको बताउछन !
अहिले उनि अनेरास्ववियुको खुल्ला बिस्व बिद्यालय राष्ट्रिय कमिटिको उपाध्यक्ष छन् ! एमालेले लुरे कमरेडको हिजोको त्याग र समर्पण लाई सम्मान गर्छ या त गर्दैन !अखिलको आगामी महाधिबेसनामा देखिने छ ! गुटको चर्को आलोचक लुरे कमरेड आफु पनि गुटबन्दि सिकार हुन् सक्ने चिन्ता ब्यक्त गर्दै सबैको सहयोग अपेक्षा गर्छन !